နှစ်တွေပြောင်းလဲသွားပေမဲ့ လိပ်ကလေးမယ်ငီး..LA ခရီးကမပြီးသေး.. 😁😂 ပြန်ဆက်ကြရအောင်လေ...
ညနေဘတ်စ်ကားကြီးနဲ့အပြန်လမ်းခုလတ်မှာဆင်းနေပြီး တူလေးကလာခေါ်။ တူမကသူ့မိသားစုနဲ့ လာတွေ့
တူလေးအိမ်မှာ တူလေးရဲ့အမျိုးသမီးနဲ့တူမလေးတွေက ရှိတာလေးတွေချက်၊ ထိုင်းစာဘဲစားမယ်ဆိုတဲ့ နမီး
တူလေးက ပိသုကာသူ့အမျိုးသမီးရော ပိသုကာဘဲ...သူတို့အိမ်လေးကတောင်ကုန်းစောင်းလေးပေါ်မှာ
အိမ်က၃-၄ထပ်လောက်ရှိလေမလားဘဲ...ဝင်တာနဲ့တက်ရပြီ..ဒုတိယထပ်မှာ ဧည့်သည်အိပ်ခန်း၊ စာကြည့်
ခန်း၊ အိမ်သာရေချိုးခန်းရှိ ဒါကနောက်ထပ်တထပ်..
ဧည့်ခန်း ထမင်းစားခန်း အိမ်နောက်အပြင်ထွက်လို့ရ..အထပ်တိုင်းဝရံတာလေးပါ
မြေးမလေး၂ယောက်..တူလေးရဲ့သမီးကမြန်မာစကားတတ်၊ တူမလေးကလေးက ထိုင်း၊ရှမ်းစကားတတ်..
ဓါတ်ပုံရိုက်မယ်ဆို..မျက်နှာကဖွက်ကြရသေး...😎😆 ကပ်ရပ် မြေးမလေးက ကျွမ်းထိုးပျော့ပြောင်း နောက်
ဓါတ်ပုံရိုက်ပေးတဲ့ (အတူခရီးသွားတဲ့ရွှေတူမလေး) သူကအရမ်းနီးတော့ အားလုံးကိုခြုံမရဘူးပြော..သူ့ကိုတံခါးဖွင့်အပြင်ထွက်လို့ပြောတော့ သူက ရူံမဲ့ရူံမဲ့နဲ့ထွက်ရ အားလုံးဝိုင်းဟားကြ...
အော်...အမှတ်တရပါဘဲ....ဘယ်အချိန်ပြန်ထပ်တွေ့ကြရမယ်မသိ...တူလေး ၅တန်းတုံးက သူ့ကိုစာသင်ပေးဖူးရတယ်လေ။အပြန်နောက်ဆုံးရထားအမှီပြေး ကျားကျားဖုံးကျန်ခဲ့ တကဲ့ဖြစ်ရပ်က သူနာရီချိန်ကြည့်မှား
ရထားကပုံမှန်ဆိုထွက်သွားတာကြာပေါ့..စာပုံးတွေထည့်နေလို့ နောက်ကျ ဘူတာရုံထိပ်ကနေ ရထားအထိ
ကော်လိပ်ကျောင်းသူကြီးကလည်း တရက်လည်ပြီး နောက်ရက်မလည်ချင်တော့ဘူးဆိုတာနဲ့ မထူးတော့ဘူး
LA ကိုနောက်နေ့မှပြန်မယ် ဒီနေ့တော့ SB ခရီးဆန့်ကြတယ်..နီးနီးနားနား ကမ်းခြေအရင်သွား
သဲသောင်ပြင်ကျယ်အပေါ်မှာ နားခိုဖို့ ပစ်ကနစ်ထွက်ဖို့..နေရာတွေ လုပ်ထားတာအများကြီး...
အုံးပင်တန်းနဲ့ (ထန်းပင်လားဟင်😏😁 ဟီးသေချာမသိ) အမိူက်ပုံး အိမ်သာ..သန့်ရှင်း..
အဲ့ဒီအင်္ကျီလှဲနေတဲ့တသိုက်က ရေငုပ်ကျင့်ကြတာ..ရေထဲမှာသူတို့ကိုလည်း ဗီဒီယိုရိုက်ထားသေး..
ခင်ခင်နှမ...ဟော်တယ်မှာမနက်စာစားပြီးထွက်လာ..လမ်းလျောက်များ ဗိုက်ပြန်ဆာ...😜 မြို့ထဲပတ်ကြမယ်ဆိုပြီး...ဒီနေရာကနေတပ်ခေါက်ပြန်.....
Posted by မီးမီးငယ် at 3:43 PM0comments Links to this post
ကိုယ်တို့ကတော့မနေ့ကသွားမလောင်းနိုင်။ မနက်မှဖားစည်ရေလောင်းပြီး နေ့လည်ဘုရားကြီးထိပ်ကနေ
တံခွန်ကုက္ကားတို့ဘာတို့နဲ့သေချာခွင့်ပန်ပြီးမှသဲချောင်းကသဲကိုယူလာရတာပါ..။ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာသဲပုံစေတီလုပ်ဖို့သဲသွားလှု..။ နောက်တရက်တော့ ဘုန်းကြီးကျောင်းတက်ကြတာပေါ့..။
လမ်းထိပ်က(ခုတော့လည်းဈေးတန်းကြီးထိပ်မှာပါဘဲ😜) အရင်ကရုပ်ရှင်ရုံထိပ်မှာနေတဲ့သူငယ်ချင်းမိသားစု..😎😉 သူတို့ကိုလည်းအဝေးကနေချောင်း...မှတ်တမ်းတင်
ပြီးမှ ရှေ့ကမြင်းစီးတာ( ရှေ့ဆုံးကမြင်းစီးတဲ့သူ အရင်ဓါးထမ်းလာရတယ်လို့ထင်တာဘဲ သိပ်မမှတ်မိချင်ဘူး)
ဒါလည်းမျိုးရိုးစဉ်ဆက် စော်ဘွားလက်ထက်ကတဲက ရွှေးချယ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ မိသားစုဝင်ထဲကဘဲ လုပ်ရတာ။ တွေ့ကရာလူကိုလုပ်ခိုင်းလို့မရဘူး..တဲ့..။
လေ။ ဒီနှစ်က နဂါးလားမသိ...။
သိကြားမင်းနောက်ကမှ စည်တော်ကလိုက်ရတာ။ စည်တော်ကိုအိမ်ကယူလာတဲ့ရေမွှေးနံ့သာနဲ့ပက်ဖြန်းကြ
တာပေါ့။ အဟဲ..စကားလှတပတပြောတာ..လူတွေတအားများတော့ အနားကပ်လို့မရ မရဲတရဲနဲ့အနီးဆုံး
ရောက်အောင်သွား မျက်စိမှိတ် ရေပုံးနဲ့လှမ်းပက်လိုက်ရတာပါဘဲလေ...😆
ပြီးကမန်းကတန်း လှေခါးပေါ်ပြန်ပြေးတက် ဗီဒီအိုလေးဆွဲရိုက်..စည်နောက်ကနေလမ်းလျောက်လိုက်သူ
အုပ်စုလိုက် ပြီးမှဆိုင်ကယ်ကိုယ်တော်တွေ အုပ်စုပြီးမှ ကားတန်းကြီး..အော်ဟစ်ဆူညံကခုန်ပျော်ပါး...
စည်တော်က မြို့ပြင်ရောက်ချိန်လောက်ဆိုရင် စည်တီးတဲ့နေရာက ပစ္စည်းတွေသိမ်းပြီး ကျန်တဲ့သူတွေလည်း
ကျောင်းမှာပြန်ထားရပါတယ်။ စည်တီးတဲ့လွှိုင်လတို့ဝတို့လည်း မြို့ထဲကိုလုံးဝပြန်မကြည့်ဘဲ တခါထဲမြို့ပြင်ထွက်သူတို့ရွာကိုတန်းပြန်ရတယ်တဲ့..ရှေးခေတ်ကအစဉ်အလာပါ..။ တကယ်တမ်းစေ့စေ့စပ်စပ်ရေးရပြော
ရရင်ကျိုင်းတုံသင်္ကြန်အကြောင်း အရှည်ကြီးပါ...။တရက်ခြင်း အစားအသောက်ပြင်ဆင်တာကအစ သင်္ကြန်
ကြိုပုံ အတာအိုးပြင်ပုံ မိုက်ကမ့်(ညောင်ထောက်) ဝါးပင်ကို တံခွန်ကုက္ကားတွေနဲ့ချိတ်ဆွဲတာ ခေါင်းလျှော်ချိန်
အားလုံးထွက်အောင်လို့တဲ့...။ ကိုယ်တို့ကတော့ ရေပုံးကိုင်ပြီး ကဲနေချိန်ဘဲရှိသေး..😝😊😉
သင်္ကြန်အတက်နေ့ ကိုယ်တို့အခေါ် "ဝမ်းဖျားဝမ်းမား" မှာတော့ ကွယ်လွန်သွားတဲ့ ဘိုးဘွားဘီဘင်ဆွေမျိုး
မောင်နှမများအတွက် "ခေါက်ရပ်နမ့်" ဆွမ်းထမင်းဟင်း လင်ပန်းနဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ကပ်လှုရတာ..။
ကိုယ့်လင်ပန်းနဲ့ကိုယ်..လင်ပန်းထဲ ဆားငံဘဲဥ ကတက်ချဉ်ရွက်သုပ် မျှစ်ချဉ်ဟင်း ဝက်ခေါက် ဝက်အူချောင်း
ဟင်းတိုင်းက နှစ်သစ်အတွက်အဓိပ္ပါယ်ရှိတဲ့ဟင်းတွေပေါ့..ဥက ဆက်လက်ပေါက်ပွားလာမဲ့သဘော......
ကတက်ချဉ်က ကုံလုံခြင်း၊ လုံလောက်ခြင်း၊ မျှစ်ချဉ်က ကောင်းခြင်းတွေအစို့ပေါက်လာမဲ့သဘော....
ဟင်း!!!! အဲ့လိုတွေပါဆို..အများကြီးမှအများကြီး။ လင်ပန်းထဲဟင်းခွက်သေးလေးတွေနဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာတိုးခွှေ့ပြီးရေစက်ချ အလှုလုပ်ရတယ်..အစိမ်းသေတာတွေအတွက်ကြတော့ ဘုန်းကြီးကျောင်းအပြင်ဖက်မှာရေစက်ချရတယ်တဲ့...။
ငယ်ငယ်တုံးကတော့ ကိုယ်တို့ဘုန်းကြီးကျောင်း ၃ကျောင်းတက်ရတယ်..။ ပထမဆုံး ဘုရားကြီးမှာဆွမ်း
အတာအိုးကအထဲမှာရေနဲ့ အပေါ်ကတနင်္ဂနွေဆိုတော့ ဂဋ္ဌုန်ရုပ်နဲ့...ဖယောင်းတိုင်တချို့ကလည်းပိုက်ဆံ
အီဖေကိုယ် တနင်္ဂနွေသမီးလေးတော့ ညောင်ထောက်ခဲ့ရတာပေါ့...မြို့လယ်ခေါင်ကညောင်ပင်...မှာ
ဆုတောင်း..ဆုတောင်း..ထီပေါက်ပါစေလို့( ပြောရအုံးမယ် တနေ့ကနှစ်သစ်မှာထီထိုးတာ 100$ ပေါက်တယ်တော့😎😘😍)
ဘုရားကြီးအပြန် ကောင်းမူ့ခမ်း(အရင်ကမောက်မယ်ကျောင်း)မှာ အလှူစာကပ် သဲပုံစေတီမှာ ဝါးကိုင်းတွေကပ်..၈နာရီလောက်တခါထပ်လာရသေးတယ်..ဘုန်းကြီးကျောင်းတက်ဖို့..
လေ..ကျိုင်းတုံမှာ ပြောလက်စနဲ့ပြောရအုံးမယ်..။ ဂုံကျောင်း ရှမ်းကျောင်း မြန်မာကျောင်း အိုး..များပြားလှ
အိမ်ရောက်တော့ အင်းသားဟင်းထုပ်နဲ့ ခေါက်အပ် စား....အင်းသားဟင်းထုပ်က အဖေတို့ရှိကတဲကအစဉ်အဆက်လုပ်ပြီးအိမ်နီးနားခြင်းဆွေမျိုးတွေကိုဝေတယ်..ခုတော့ အမေတို့ရဲ့ မွေးစားမိသားစု(သူတို့မိသားစု
တောင်ကြီးကနေ ကျိုင်းတုံပြောင်းလာချိန် အိမ်မှာဆေးလိပ်လာလိပ်ပြီး..အမေ့ကိုသူတို့အမေလိုချစ်ခင်လေး
စားတာ..သားသမီးမြေးမြစ်အထိ..အိမ်ကလိုအပ်ရင်စဆုံးအမြဲကူညီလုပ်ကိုင်ပေး) သူတို့က EPC မှာနေတာ
သူ့ဆီမှာတယ်..အထုပ်၂၀၀ လောက်မှာပြီး အလှုလုပ်ပေါ့လေ...။
Posted by မီးမီးငယ် at 11:33 AM2comments Links to this post
Posted by မီးမီးငယ် at 12:45 PM0comments Links to this post